Nahazo kaomisarian’ny polisy vaovao mantsy ny kaominina Alasora izay vao notokanana omaly raha ho avy tsy ho ela ihany koa ny an’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny fokontany Miadana. Mitentina 120 tapitrisa Ar ny vola lany izay nisy komity natsangana nanara-maso ny fandeham-bola ary eny By-pass no misy ny fotodrafitrasa. Ny minisitera no nanome ny drafitry ny trano ka natokana ao ambany rihina ny birao fiasana rehetra miampy ny “violon”. Any ambony rihina kosa ireo kaomisera rehetra no miasa, fotodrafitrasa izay hiasa tsy ho ela. Mandray ny olana rehetra mety mitranga eny anivon’ny fiarahamonina ity kaomisarian’ny polisy vaovao eny amin’ny By pass ity, raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanànan’Alasora Atoa Marc Ramiaranjatovo omaly. Lohalaharana amin’izany ny lozam-pifamoivoizana noho ny fisian’ny loza mateti-pitranga eny amin’ny lalana By-pass, ny vaky trano, ny vono olona….Nomarihin’ingahy Ben’ny tanàna fa vokatry ny ezaky ny tsirairay no nahafahana nanangana ny fotodrafitrasa, narahin’ny fanampian’ireo malala-tanana sy ny minisitry ny filaminam-bahoaka.